“အဖိုးတန် သမိုင်းဝင် အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် တန်ဖိုးမသိသူတွေက ဖြိုဖျက်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ “ဂျူဗလီဟော” အဆောက်အဦးကြီးအကြောင်း” – စွယ်စုံသုတ
နောင်းလူတို့ နာမည်သာ ကြားဖူးပြီး မည်သည့်နေရာ တွင် ရှိခဲ့သလဲ ၊(လက်ရှိ တွင်ကော ဘယ်လို အဆောက် အဦး ဖြစ်နေပြီလဲ)
ဖျောက်ဖျက် မရနိုင်တဲ့ အတိတ် သမိုင်း အကြောင်းအရာများစွာ ဖြင့် ပြည့် နက်နေသော အဆောက် အဦး…..
✍️ ထိုအဆောက်အဦးကတော့ အားလုံးကြားဖူးနားဝရှိကြတဲ့ Jubilee Hall (ဂျူဗလီဟော)ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
?Jubilee Hall (ဂျူဗလီဟော)
ကို ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း နှင့် ဦးဝီစာရလမ်း နှစ်ခု ကြား တွင်တည်ရှိ ခဲ့ပါသည်။
တချိန် က ရန်ကုန်ရှိအမြင့်ဆုံး အဆောက်အအုံတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
? Jubilee Hall (ဂျူဗလီ ဟော) သည်ရန်ကုန်သမိုင်းတွင် အရေးပါသော သမိုင်းဝင်ထင်ရှားသည့် အဆောက်အဦး တခု ဖြစ်သလို ကိုလိုနီခေတ်သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
?Jubilee Hall ကို ၁၈၉၇ ခုနှစ် တွင် ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယား၏နန်းစံနှစ် ၆၀ ပြည့် စိန်ရတု အထိမ်း အမှတ် အဖြစ် Gothic style ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလတွင် “အရှေ့တိုင်းတွင်အကောင်းဆုံး စံ ထား အပ်သည့် အဆောက်အဦး များထဲမှတစ်ခု” ဖြစ်သည်။ကိုလိုနီခေတ် လူမှုဆက်သွယ်ရေးဗဟိုမှသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု အထိ အခမ်းအနားများ နှင့်ဧည့်ခံ ပွဲများအတွက် အကျော်ကြားဆုံးအသုံးပြု‌သော နေရာဖြစ် ခဲ့သည်။
✍️အဆောက်အ ဦး သည် ပြဇာတ်ရုံဆန်ဆန်တည်‌ဆောက်ပုံ နှင့် ထိုင်ခုံ ၈၀၀ခန့်ပါရှိသည်။ အဆောက်အအုံထဲသို့ အဝင် တွင် ဧည့်ခန်းမ အကျယ်ကြီး နှင့် ခန်းမအပေါ်ထပ်လသာဆောင်သို့ တက်သည့် လှေကားနှစ်ခုပါရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ပါတီပွဲ များနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများကျင်းပရန် အတွက်အကောင်းဆုံး‌နေရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
?ဘယ်လို အခမ်းအနား‌ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့သလည်း……
✍️ကိုလိုနီခေတ် တလျှောက်လုံး တွင် ထိုအဆောက်အဦး ကို ရန်ကုန်မြူနီစီပယ် မှစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
✍️ အစောပိုင်းကာလများက ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ရုံဖွင့်ပွဲနှင့်တွေ့ဆုံပွဲများကျင်းပခဲ့သည် ၊
✍️ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၏ ပထမဆုံး ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအလေးမပြိုင်ပွဲ ၊ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ တို့ ကို Jubilee Hall တွင်ကျင်းပခဲ့ဖူးသည်။
✍️ ထိုမျှမက ၎င်းနေရာ၌ပင် ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူး သည်။
✍️၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်ထိုအဆောက်အ ဦး တွင်ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ကွန်ဗင်းရှင်းပွဲ ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးဖွဲ့စည်းပုံ ကိုရေးဆွဲခဲ့သည့် နေရာ လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အနုပညာနှင့်လက်မှုအနုပညာပြပွဲများကျင်းပရာနေရာလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ခန့်အပ်ခြင်းအခမ်းအနားများ၊ မြို့၏ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မင်္ဂလာဆောင် ဧည့်ခံပွဲများကျင်းပရာနေရာလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ် တွင် ဗြိတိန်အားကူညီသည့် ရန်ပုံငွေများကိုပြသခဲ့သော နေရာ လည်း ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။ထိုမျှမက ခရစ်စမတ်ပွဲများ၊ အကများ၊ လက်ဝှေ့ထိုးပြိုင်ပွဲများ၊ ကျောင်းပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ Anyeint (ရိုးရာဗမာပြဇာတ်အနုပညာ)၊ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများနှင့်အခြားလူမှုရေးပွဲများကျင်းပ ရေးအတွက်အဓိကနေရာဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည်ကိုလို နီခေတ်တွင် အင်အားကြီး ၊ပညာတတ် ၊ ချမ်းသာသောအထက်တန်းလွှာများအတွက်စုရုံး‌ရာ နေရာ‌လေး တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
✍️ ခန်းမကို ကဗျာဆရာ ရာဘင်ဒရာနနတ်တဂိုး၊ အိန္ဒိယ အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်မဟတ္တမဂန္ဒီ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဂျဝါဟာလာနေရူးအပါအဝင် အခြား ထင်ရှားသော ဧည့်သည်တော်များစွာတက်ရောက်ခဲ့ဖူး သည်။
✍️ စစ်ပြီးနောက် ၁၉၄၆ တွင် ထိုအချိန်က နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ် သည့်ဆာဂျွန်ဂျီလ်ဂတ်ဒ်(Sir John Gielgud) သည် ခန်းမ၌ ရှိတ်စပီးယား၏“ Hamlet”ပြဇာတ်ကို ကပြသွားခဲ့ဖူးသော နေရာလည်းဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်က Jubilee Hall သည်မြို့၏အဓိကအလှတရားအထင်ကရနေရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
?တော်ဝင်စကော့စစ်တပ်၊ ရိုးရာမြန်မာတီးဝိုင်းများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင် လေအ‌ဝေ့ တွင် ပေါ် ထွက်လာလေ့ရှိသော အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်သီချင်းများ၏ချိုမြသောသီချင်းများကိုလည်းရံဖန်ရံခါ ကြားတတ် ရသည်။
သို့သော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် ဂီတ‌တွေ စိတ်သုံး တိတ်ဆိတ်သွားပြီး ခန်းမကြီး သည်လည်းရုတ်တရက် ခြောက်သွေ့ သွားခဲ့သည်။
ရန်ကုန် မြို့လယ် နှင့်အနည်းငယ်‌ဝေးကွာ‌သောကြောင့် စစ်ပွဲအတွင်း ဗုံးဖောက်ခွဲမှုဒဏ် မှလွတ်မြောက်ခဲ့‌သော အဆောက်အဦးလည်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းပါတီများနှင့်အခမ်းအနားများသည်အလွန်နည်းပါးသွားသည်။
ထိုကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသည်အလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခများခံစားခဲ့ရသည်။ဂျပန်ခေတ်တွင် ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရသည်ခန်းမအမည်ကို Great Bamar Royal Hall (မဟာဗားမားရုံတော်ကြီး)ဟုပြောင်းလဲ‌ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လူအများစုကယင်းကို Jubilee Hall ဟု ပင် ဆက်လက်ခေါ် ခဲ့ ကြသည်။
?၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် ဝန်ကြီးများရုံး ၌ လုပ်ကြံခံရ သော ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့်တကွ အခြား‌သော အာဇာနည်များ၏ ရုပ်ကြွင်းများကို ၆ လကြာ ထားရှိခဲ့ ဖူးသောနေရာလည်းဖြစ်သည်။
?၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ” ဂျူဘီလီဟော”သည်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပွဲတော်များနှင့်ပွဲများအတွက် နေရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံး ပြုခွင့်မရတော့ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးအမျိုးသားစာကြည့်တိုက် နှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ကို Jubilee Hall တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
✍️ ခန်းမကြီးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှ ဗုံးဒဏ်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင် ခဲ့သောမြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၏ အစီအစဉ်များကို တော့ မလွတ်‌ မြောက် နိုင်ခဲ့ပါ။?
စစ်အစိုးရက၎င်းကို (မရေရာမခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက် ) ကိုလိုနီခေတ်သမိုင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်ရှု မြင်သောကြောင့် အကောင်းပကတိ ရှိ‌နေသော Jubilee Hall အဆောက်အဦးကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဖြိုဖျက်ခဲ့ ကြသည်။?(အလားတူ သမ္မတအိမ်တော် လည်းပါသေးသည်။)
✍️ နောက်ပိုင်း ထိုနေရာတွင်မြန်မာ့တပ်မ‌တော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်အဖြစ် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင်အစား ထိုးဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ မတ်လ ၂၄ တွင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့သည်။ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၁၀၉ ကျပ်ကုန်ကျခဲ့သည်။
ထိုပြတိုက်သည်လည်း တိုတောင်းသောကာလသာကြာခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တဖန် ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြန်သည်။ထိုနေရာလည်း စစ်တပ်၏လက်ထဲသို့ရောက်သွားခဲ့သည်။
ယနေ့လက်ရှိအချိန် တွင် အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၁၆၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသည် ထိုနေရာ၌ japan Co. ဖြစ်သည့် Fujita Co. Y Complex Project (YCP) နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃ ၂.၅ သန်း(ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၀၁ ဘီလီယံ) တန် Hotelတခုအပါအဝင် ၊‌ခေတ်မှီရုံးခန်းများနှင့် ဈေးဝယ် စင်တာများပါဝင်‌သော ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတခု ကို တည်ဆောက်လျက်ရှိနေပါသည်။
✍️ ရှေးလူကြီးများစွာက ဂျူဗလီဟော၏တန်ဖိုးကို သိပြီး ထိန်းသိမ်းလာအောင် ရေးသား ခဲ့ကြ ပေမယ့် တကိုယ်ကောင်းဆန် အတ္တ ဝါဒီ သမား တွေကြောင့်
ယနေ့အချိန် တွင် တော့ Jubilee Hall (ဂျူဗလီဟော) ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦးကို ပြသရန် ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းသာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ အချိန်ထိ Jubilee Hall သာရှိခဲ့ ပါက နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကိုကျော်လွန်နေ၍ မြို့ပြ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဆောက်အဦး တခု အဖြစ် ကမ္ဘာ့အလည်မှာဂုဏ်ယူစွာ တည်ရှိနေမှာမလွဲပါ။
ရုပ်ဝတ္တု‌တွေရဲ့ မတည် မြဲခြင်းသဘောရှိကြ ပေမယ့် ၎င်းတို့ ဖြတ်သန်း လာခဲ့တဲ့ ကာလတခု၏ သမိုင်း ကြောင်း‌ ရက်စွဲ များကတော့ ထာဝစဉ် တည်ရှိနေမှာမလွဲ ဧကန်ဖြစ်ပါတော့သည်။
Credit:. Old but Gold.
“နွားဦးတိုက် ဆရာတော်ရဲ့ နွားလေးနဲ့ ဝက်ကလေးတို့ရဲ့ အံ့ဖွယ်သံယောဇဉ်”(ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်)